Vatungamiriri nevaprofita vanotsiurwa (1-12)
Mika anopiwa simba nemweya waJehovha (8)
Vapristi vanodzidzisa kuti vawane mari (11)
Jerusarema richava matongo (12)
3 Ndakati: “Teererai, imi vakuru veimba yaJakobhoNemi vatungamiriri veimba yaIsraeri.+ Hamufaniri kunge muchiziva zvinhu zvakarurama here? 2 Asi munovenga zvakanaka+ muchida zvakaipa;+Munobvisa vanhu vangu ganda ravo nenyama yavo pamapfupa avo.+ 3 Munodyawo nyama yevanhu vangu+Uye munobvisa ganda ravo,Munotyora mapfupa avo muchiapwanya-pwanya+Sezvinhu zviri kubikwa muhari uye senyama iri muhari yekubikira. 4 Panguva iyoyo vachashevedzera kuna Jehovha kuti avabatsire,Asi haazovapinduri. Achavavanzira chiso chake panguva iyoyo+Nemhaka yemabasa avo akaipa.+ 5 Zvanzi naJehovha pamusoro pevaprofita vari kutsausa vanhu vangu,+Vaya vanoti, ‘Rugare!’+ pavanenge vachiruma* nemazino avo+Asi vachiti munhu wese asingavapi zvekudya anofanira kurwiswa: 6 ‘Huchava usiku kwamuri;+ hamuzooni chiratidzo;+Muchangoona rima chete, hamuzofemberi. Zuva richavirira vaprofita,Uye masikati achava rima kwavari.+ 7 Vaoni vachanyadziswa,+Uye vanofembera vachaora mwoyo. Vese vachabata miromo yavo,*Nekuti Mwari haazovapinduri.’” 8 Asi kana ndiri ini, mweya waJehovha wandipa simba guru,Nekururama neushingi,Kuti ndiudze Jakobho nezvekupanduka kwake uye Israeri chivi chake. 9 Inzwai izvi, imi vakuru veimba yaJakobhoNemi vatungamiriri veimba yaIsraeri+Vanovenga kururama uye vanomonyanisa zvinhu zvese zvakarurama,+ 10 Imi vanovaka Ziyoni vachideura ropa uye vanovaka Jerusarema vachiita zvisina kururama.+ 11 Vatungamiriri varo vanotonga kuti vawane chiokomuhomwe,+Vapristi varo vanodzidzisa kuti vawane mubhadharo,+Uye vaprofita varo vanofembera kuti vawane mari.*+ Asi vanoti vanovimba naJehovha, vachiti: “Handiti Jehovha anesu here?+ Hapana dambudziko richatiwira.”+ 12 Saka Ziyoni richarimwa semundaNemhosva yenyu,Jerusarema richava matongo,+Uye gomo rine Imba* yacho richaita senzvimbo dzakakwirira dziri musango.*+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “pavanenge vaine zvekutsenga.”
^ Kana kuti “vachavhara ndebvu dzavo dzepamusoro pemuromo.”
^ Kana kuti “sirivha.”
^ Kana kuti “yakakwirira izere nemiti.”